Fanampin'ny fahafaha-manao amin'ny Prime Editing Platform nambaran'ny Prime Medicine
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Fanampin'ny fahafaha-manao amin'ny Prime Editing Platform nambaran'ny Prime Medicine
Prime Medicine, Inc., orinasa iray natsangana hanatanteraka ny fampanantenan'ny Prime Editing, androany dia nanambara ny fanampian'ny fahafaha-manao ny lampihany miorina amin'ny fikarohana siantifika farany.
"Faly be izahay mahita ny fanatsarana mipoitra izay hampitombo ny fahafahan'ny praiminisitra fanovana ho fomba fitsaboana," hoy i Keith Gottesdiener, MD, CEO an'ny Prime Medicine. "Ireo fandrosoana ireo, eo ambonin'ny teknolojia fototra efa an-dàlam-pandrosoana, dia mety hampitombo ny fahombiazan'ny Prime Editing, ary hanitatra ireo faritra mety hiasan'ny Prime Editing, mety hanitatra ny fivelaran'ny aretina fanampiny izay mbola tsy nisy fomba fanovana fototarazo afaka. hiresaka. ”
Miaraka amin'ireo fandrosoana vaovao ataon'ny mpahay siansa ivelany, ary amin'ny ezaka ataon'ny Prime Medicine ataon'ny ekipany fampandrosoana anatiny, manantena ny hanatsara bebe kokoa ny fahaizan'ny Prime Editing, ny marim-pototra ary ny fahombiazany. Ireo fahaiza-manao voalaza ao amin'ny taratasy vao haingana tao amin'ny Biotechnology sy Cell momba ny natiora dia ahafahana mampivelatra fitsaboana mahomby kokoa amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny asa fanovana.
Ny fandrosoana iray dia misy torolàlana Prime Editing RNA (pegRNA). Ny Prime Editing dia mampiasa molekiola pegRNA hahitana ny lasibatra fototarazo ary hitarika ny fanamboarana na fanovana tadiavina. Tamin'ny taratasy navoaka tao amin'ny Nature Biotechnology tamin'ny 4 Oktobra 2021, ireo mpanoratra notarihin'i David R. Liu, iray amin'ireo mpanorina ny Prime Medicine, dia nampiseho fa ny pegRNA (epegRNA) vita fanamboarana novolavolaina, dia afaka manatsara ny fahombiazan'ny fizotry ny fanovana am-polony.
Ilay orinasa koa dia manenjika ireo paikady nofaritana vao haingana momba ny fanatsarana ny fahombiazana amin'ny alàlan'ny fanodinana làlana fanamboarana ADN manokana. Tamin'ny taratasy navoaka tao amin'ny Cell tamin'ny 14 Oktobra, 2021, ireo mpanoratra notarihin'i Liu sy Britt Adamson dia namantatra làlana fanamboarana ADN manokana, nantsoina hoe làlan'ny fanamboarana tsy fitoviana, izay manatsara ny fahombiazan'ny fanovana voalohany. Nasehon'izy ireo fa ny hetsika fanovana dia azo hitombo avo roa heny, ary ny vokatra tsy nirina dia azo ahena avo roa heny, amin'ny alàlan'ny fanodinana ny lalan-tsy fitoviana amin'ny fomba maro.
Ny Prime Medicine dia manana zon'ny varotra avy amin'ny Broad Institute of MIT sy Harvard hampiasa Prime Editing ho an'ny fitsaboana olombelona, ​​fa ny mpahay siansa sy ny orinasa manerantany kosa dia manohy mampiasa ny Prime Editing ho an'ny tanjona fikarohana sy ny fampiharana hafa.